Google weputara uzo mbu nke gam akporo O na ndia bu ozi ya | Akụkọ akụrụngwa
Google weputara uzo mbu nke gam akporo O ma ndia bu ozi ya
Otu afọ gara aga Google mere ngwa ngwa wepụtara ụdị nyocha mbụ nke gam akporo N, nke mechara kpọọ Nougat. Ugbu a, nnukwu ọchụchọ ahụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na gam akporo 7.0 dị anya na enweghị ọnụnọ a tụrụ anya ya, amalitela nke mbụ Gam akporo O Preview, nke dị mwute ikwu na ọ bụghị anyị niile nwere ike ịnwale n'efu.
Ma ọ bụ na n'adịghị ka ihe Google mere na mbido nke gam akporo Nougat, nke dị site na OTA, yana gam akporo O onye ọ bụla na-emepụta ga-eji aka ya budata ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ wee gbanye ya na ngwaọrụ ha.
N'oge a ọ ga-ekwe omume ịnwale gam akporo O, ya na akwụkwọ akụkọ ya niile yana ntụpọ ya niile ebe ọ bụ na anyị echefula na anyị na-eche ụdị mbido, ọ bụ ezie na maka nke a, ị ga-enwerịrị Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Google Pixel, Google Pixel XL, ma ọ bụ Google Pixel C. Ekwesịrị iche na izu ole na ole ma ọ bụ ọnwa mmelite ahụ ga-adịkwa iji nwalee site na Android Beta.
1 Ndị a bụ isi akwụkwọ akụkọ nke gam akporo O
1.1 .Ma ọkwa
1.2 Foto dị na Foto dị (PiP)
1.3 Multi-ihuenyo Nkwado
1.4 Igodo igodo
1.5 Ndabere ngwa mgbochi
1.6 Ekwekorita Nchọpụta Obodo
1.7 Na-akpọ mmelite ngwa
1.8 Na ọtụtụ ndị ọzọ ...
2 Kedu mgbe gam akporo O ga-abata na ama m?
Ndị a bụ isi akwụkwọ akụkọ nke gam akporo O
Site n'aka nke gam akporo O, ezigbo ozi ọma ga-eru na ngwaọrụ anyị nke anyị ga-enyocha n'okpuru;
Site na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo os, Google etinyela atụmatụ ọhụrụ akpọrọ ọwa ngosi, nke ga - eme ka anyị tinye ọkwa nke ngwa ahụ n’otu. Ruo mgbe anyị ga-ahụ ya ma hụ ya, anyị agaghị enwe ike ịmata uru nke a ga-enwe, mana dịka ọmụmaatụ, ọ ga-enyere anyị aka ịnwe ngwa akụkọ na ijikọ ọkwa nke egwuregwu na teknụzụ, na-enweghị ịhụ ọkwa maka ozi ọ bụla dị ka ọ na-eme ugbu a.
Foto dị na Foto dị (PiP)
Ngwa ndị anyị ji eme ihe na gam akporo O nwere ike iji ya mee ihe na Foto dị na Foto ma ọ bụ otu ihe ahụ ka vidiyo wee na-aga n'ihu na-egwu na obere windo ọbụlagodi na ị gbanwee na ngwa ọzọ. Nke a mode nwere ike ugbua hụrụ na YouTube na ọtụtụ ndị ọrụ na ọ bụ hoo haa na-akpali.
Nkwado ọtụtụ ihuenyo bụ otu ọrụ ọtụtụ ndị ọrụ nwetụrụ kachasị na ngwaọrụ gam akporo anyị ma ugbu a sitere n'aka gam akporo O. Ekele dịrị ya, anyị nwere ike ịmalite ọrụ na ihuenyo dịpụrụ adịpụ.
Igodo Keyboard bụ ihe dịlarịrị na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ eji arụ ọrụ na ọbụnakwa na ụfọdụ ndị nrụpụta agbanweela n'ime gam akporo. Ugbu a, enwere ike iji nhọrọ a mee ihe ekele maka gam akporo O.
Ọ bụla onye ọrụ nwere ike iji igodo na akụ na taabụ n'ime ngwa, ihe na - atọ ụtọ ma baa uru mgbe ụfọdụ.
Ndabere ngwa mgbochi
Batrị na obodo kwụụrụ onwe ya bụ ihe Google tinyebere uche ya na ụdị nke gam akporo kacha ọhụrụ, gam akporo O agaghị abụ ihe dị iche. Ma ọ bụ na mmalite nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ anyị ga-ahụ ọnụọgụ mgbochi na ngwa ọdịnala na-agba ọsọ na ndabere.
Mgbochi ndị a na-elekwasị anya n'akụkụ atọ; Mgbasa ozi doro anya, ọrụ ndabere, na mmelite ọnọdụ, nke anyị ga-amụta nkọwa gbasara oge.
Ekwekorita Nchọpụta Obodo
Ọrụ WiFi ọhụrụ ga-adịkwa na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, dịka ọmụmaatụ na Neighborhood Aware Networking (NAN) nke ga-ekwe ka ngwa iji gwa ibe ha okwu na-enweghị ebe nnweta dị n'etiti na ọbụlagodi na enweghị njikọ na netwọkụ nke netwọkụ.
Na-akpọ mmelite ngwa
Agbanyeghị na atụmatụ a ga-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ karịa maka ndị ọrụ, anyị enweghị ike ileghara ya anya. Ọganihu a ga-elekwasị anya na ndị mmepe nwere ike iwulite njirimara nke onwe ha maka ngwa oku enwere ike ijikwa ma lekwaa anya site na ngwaọrụ nwere ihuenyo, dị ka nke anyị nwere ike ịchọta n'ụgbọala ọ bụla.
Ndị a agaghị abụ naanị ihe ọhụụ gam akporo O ga-enye anyị ma ọ bụ na akara ngosi na-agbanwe agbanwe ga-adịkwa, nke anyị hụbururị na Google Pixels, nkwado maka akwa ngebichi chromatic, nkwado maka ogo Bluetooh codecs ọdịyo, nkwado dị mma maka isi mmalite WebView yana kwa ọdịyo ọdịyo API.
Kedu mgbe gam akporo O ga-abata na ama m?
Google eweputala ụdị mbido gam akporo O maka ndị mmepe, yabụ ụdị ọhụrụ nke sistemụ ọchụchọ nke nnukwu ihe dị adị n'etiti anyị, ọ bụ ezie na ọ na-eme mgbe niile, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ike, ma ha ekwesịghị, wụnye ya na ama ha ma ọ bụ mbadamba.
Cheta na ngwaọrụ nke onye nrụpụta ọ bụla nwere ike iwunye gam akporo O bụ ihe ndị a;
Echere na ndepụta a nwere ike itolite ka izu na-aga, ọ bụ ezie na Google na-achọkarị ịhapụ ụdị nsụgharị nke gam akporo maka ọtụtụ ngwaọrụ.
N'agbata Mee na June, a ga-amalite ụdị nke mbido nke abụọ, site na June na July nke atọ ga-abata, yana ụdị nke ikpeazụ nke API maka gam akporo Studio. Mgbe oge ọkọchị gachara, anyị kwesịrị ịnwe ụdị nke anọ nke mbido, na obere oge anyị nabatara nsụgharị ikpeazụ.
Ọ bụrụ na anyị nyochaa ụzọ a nke emere ugboro ugboro na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, anyị nwere ike ịnụ ụtọ gam akporo O na njedebe nke afọ na ngwaọrụ ụfọdụ n'ụzọ gọọmentị ma na-enweghị mbido nke mbido nke na njedebe ịhapụ ịhapụ ịbụ ngwanrọ na ule ma nwee njehie na nchinchi.
Kedu ihe ị chere gbasara atụmatụ ọhụrụ nke gam akporo O ga-etinye na nke ga-erute ngwaọrụ anyị tupu njedebe nke afọ?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Google weputara uzo mbu nke gam akporo O ma ndia bu ozi ya
Unboxing na mmetụta mbụ nke iPhone 7 Plus (RED)
Onye na-eme elekere okomoko Gc ga-ebido ihe gam akporo Wear smartwatch